Ndị tụkwasịrị obi sitere na Google, ngwa ahụ nwere ike ịchekwa ndụ gị | Gam akporosis
Contactstụkwasị obi kọntaktị site na Google, ngwa ahụ nwere ike ịzọpụta ndụ gị
Ngwa m ga-eweta n'okpuru, ngwà Tụkwasịrị Obi Google Ndi ana-akpo, Ọ bụ ngwa anyị nwere ike ịkọwa dị ka otu n'ime ngwa kacha mma maka gam akporo ma ọ bụrụ na mberede ma ọ bụ ụdị nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ihe ọghọm ọ bụla, na ọ bụ na Google mepụtara ngwa dị oke egwu na nwere ike ịchekwa ndụ gị site na ịpị bọtịnụ.
Omeela ọnwa ole na ole kemgbe enyi m na onye ọrụ ibe m Manuel Ramirez nyochara ngwa ahụ, nyocha ị nwere ike ịchọta na otu njikọ a, ọ bụ ezie na ahụwo m ngwa ahụ na-atọ ụtọ ma bara uru nke na achọrọ m ịbanyekwu n'ime ya, na-etinye ya na gam akporo m iji gosi gị ihe niile Google Ndi ana-akpo Tụkwasịrị Obi na-enye anyị, nke m na-ekwughachi gị bụ ngwa nke nwere ike ịchekwa ndụ gị ma ọ bụ tufuo ezigbo agba aja aja.
Na vidiyo nke m hapụrụ gị n’elu usoro ndị a, na mbido isiokwu ahụ, a na m akọwa ya n’ụzọ zuru ezu ihe niile ndị Google tụkwasịrị obi na-enye anyị, ngwa nwere ike ịzọpụta ndụ anyị ma ọ bụ ọbụlagodi ị nwere ike inyere anyị aka ịchọta onye ahụ na-efu efu nke ahụ na-eleghara oku anyị na-akpọ gị gam akporo ọnụ.
Ngwa ahụ Ndi ana-akpo Google Kwadoro Ọ bụ ngwa anaghị akwụ ụgwọ, nke, kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ị ga - enwe ike ibudata ya ozugbo na Playlọ Ahịa Google naanị site na ịpị na drọwa m hapụrụ n'okpuru usoro ndị a.
Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ gị na mpaghara gị ma ọ bụ mpaghara mpaghara Ndị ọrụ ukara Google Tụkwasịrị Obi kọntaktị egosighi, echegbula onwe gị ebe ọ bụ na ị ga-enwe ike - budata ngwa ahụ site na ịpị otu njikọ a.
1 Budata kọntaktị Google tụkwasịrị obi n'efu na Storelọ Ahịa Play
2 Mana gịnị ka Google na-enye anyị ezigbo kọntaktị?
Budata kọntaktị Google tụkwasịrị obi n'efu na Storelọ Ahịa Play
Tụkwasịrị Obi Ndi ana-akpo
Mana gịnị ka Google na-enye anyị ezigbo kọntaktị?
Ndị Nkwado Google Kwadoro na-enye anyị ọrụ dị egwu nke inwe ike, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mee ka ndị kọntaktị anyị tụkwasịrị obi dị. Anyị ga-agbakwunye kọntaktị ndị a tụkwasịrị obi site na ịhọrọ kọntaktị nke anyị tinyeworo na akaụntụ Google anyị mekọtara ma dị mkpa ma dị mkpa maka ngwa ahụ iji rụọ ọrụ nke ọma.
Dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ikekwe, kọntaktị ndị a tụkwasịrị obi nke anyị na-ahọrọ na akwụkwọ ndekọ ekwentị gam akporo anyị na akaụntụ Google anyị ahọrọ ma mekọrịta, ha ga-enweta ọkwa na-ajụ ha ma ha achọrọ isonye na netwọkụ a nke ntụkwasị obiỌ bụrụ na ị zaa ajụjụ ahụ nke ọma, Google ga-agba gị ume ibudata ma wụnye ngwa ọrụ ndị ana-akpọ Google Ndi ana-akpo.
Mgbe kọntaktị ahọpụtara na gị onwe gị ejikọtara site na ịnakwere arịrịọ ahụ, ngwa ahụ ga-enye anyị ohere iziga ọkwa anya na kọntaktị ndị ahọpụtara na mbụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na mberede ma ọ bụ ọnọdụ dị oke egwu dị egwu, anyị ga-enwe ohere izipu ozi na ebe ikpeazụ anyị na kọntaktị niile a tụkwasịrị obi na anyị agbakwunyela na listi anyị nke Ndi ana-akpo Google Tụkwasịrị Obi, gbaghara ihe nkwụsị.
Dị ka a ga - asị na nke a ezughi oke, kọntaktị Google tụkwasịrị obi na - enyekwa anyị ohere zipu arịrịọ ọnọdụ na kọntaktị ọ bụla anyị gbakwunyere dị ka kọntaktị a tụkwasịrị obi, mara ọkwa nke ga-erute onye ahọpụtara site na atụmatụ anyị, nke ọ bụrụ na ịzaghị n'ime oge kachasị nke nkeji ise, ngwa ahụ n'ụzọ zuru oke ga-ezitere anyị ọnọdụ ikpeazụ dịnụ nke njedebe Android nke kọntaktị ahụ ekwuru na anyị enweghị ike ịchọta.
Ka o sina dị, ka m na-agwa gị, kọntaktị Google tụkwasịrị obi bụ a ngwa dị ukwuu na ngwa ọrụ dị ukwuu nke ahụ ga - enyere anyị aka ịchọta kọntaktị ọ bụla tụkwasịrị obi nke anyị tinyebere na atụmatụ anyị, iji zere ị havingụ mmanya na - adịghị mma na nhụjuanya ahụ dị egwu nke na - eme mgbe ị na - achọ onye ị hụrụ n'anya ma ị nweghị ike ịchọta ya ebe ọ bụla.
Tụkwasịrị Obi Google Ndi ana-akpo bụ ngwa karịsịa emepụtara maka ọnọdụ na nche ma ọ bụ ihe mberede nke ndị agadi ma ọ bụ onye ọ bụla chọrọ enyemaka ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, e mekwara ya maka njikwa nke ndị agadi nọ naanị ha n'ụlọ, ndị ọrịa na n'ozuzu maka onye ọ bụla achọghị iji oge ndị ahụ nke enweghị mgbagwoju anya mgbe ị na-amaghị ebe onye ahụ ma ọ bụ onye ọ hụrụ n'anya bụ na ị maghị ebe ị ga-amalite ịchọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Contactstụkwasị obi kọntaktị site na Google, ngwa ahụ nwere ike ịzọpụta ndụ gị
Kedu smartwatches ga-enweta Android Wear 2.0?